Ogaden News Agency (ONA) – Dood cilmiyeed uu qabtay TV ga Ilays
Dood cilmiyeed uu qabtay TV ga Ilays
Waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaaladaNairobiee caasimada dalka Kenya Barnaamij dood cilmiyeed ahaa oo qayeb ka ahaa barnaamjiyo taxane ahaa oo magaaladaNairobiay ku qabteen wariyeyaasha iyo hawl wadeenada TV-ga Ilays kaas oo mudo isbuuca ah ka socoday halkaas.
Barnaamijka maanta ayey doodu ku saabsanayed dood dhex martay dhalinyaro gabdho iyo wiilal isugu jiray, iyadoo ay qeyb walba muujineysay dareenkooda iyo fikir ahaan sida lagu hormarin karo doorka ay dhalinyaradu ku leeyihiin halganka Ogaadeeniya loona kobcin karo garaadka dhalinyarada aqoonta iyo taariikhada halgankooda .
Waxay aad ooga doodeen dhalinyaradu sidii loo dhisi lahaa aqoonta cilimiga casriga ah ee maanta dunidu isticmaasho iyo xirfadleyaal aqoon u yeesha cilmiga Saxaafada si halganka doorka dhalintu ku leedahay loo buuxiyo qeyb walba oo dhalinyarada looga baahnaa ay kaalintooda ooga ciyaaraan.
Sidoo kalana waxay dhalinyaradu ka doodeen doorka gabdhaha iyo wiilashu ay ka kala qaataan halganka Ogaadeeniya iyadoo wiilasha iyo gabdhuhu mid walba uu soo bandhigayey meesha u baahan in ay culeyska saaraan si shaqada halganka gobanimodoonka ah loo taabo galiyo.
Dhalinyarada dood cilmiyeedkan ka qayeb gashay ayaa qaar kamid ah waxay dhasheen aasaaskii jabhada Waddaniga Xoreynta Ogaadeeniya halka qaarkood ay dhasheen xiligii dagaalka hubaysan ee JWXO uu bilowday taasna waxay muujiyneysaa sida halganka Ogaadeeniya uu u taabo galay.
Barnaamijkaa xiisaha leh ayaad ka daawan doontaa IleysTV.